जीवनको ज्ञान—तपाईंमा भएको परमेश्वरको जीवनलाई महसुस र अनुभव गर्नुहोस् | रेमा साहित्य वितरकहरू
समूह तीन, दोस्रो पुस्तक, २३८ पृष्ठहरू ।
ख्रीष्टियानहरूझैं हामीले प्राप्त गरेको परमेश्वरको जीवनलाई हामीले जान्नैपर्छ । विटनेस लीले यो जीवनको हाम्रो अनुभवलाई गहिराइमा लान परमेश्वरको जीवनको विस्तृत अध्ययन प्रदान गर्दछ । यसले जीवनको मार्गलाई चमक दिँदछ र परमेश्वरलाई पूर्ण तरीकामा हाम्रो जीवन हुनको निम्ति जग प्रदान गर्दछ ।
परमेश्वर र उहाँको अधिकारलाई अभिव्यक्त गर्ने उचित ख्रीष्टियान जीवनको लागि गोप्य कुरा पत्ता लगाउनुहोस् ।
जीवन के हो र जीवन के होइन भनी थाहा पाउनुहोस् ।
प्राणबाट उद्धार गरिनुहोस् र आत्मिक खुट्ट्याइको अनुभव गर्नुहोस् ।
ओइलाइएको अनुभूति गर्नुहुन्छ ? जीवनको बढाइ, जीवनको चेतना र जीवनको सङ्गतिलाई अनुभव गर्नुहोस् ।
“परमेश्वरको चाहना उहाँको स्वरूप धारण गर्ने, उहाँको महिमालाई प्रकट गर्ने, र उहाँको शत्रुलाई निराकरण गर्न उहाँको अधिकारलाई धारण गर्ने, मानिसमा पूर्ण, सामूहिक अभिव्यक्ति पाउनु हो । तैपनि, थोरै विश्वासीहरूले यो चाहनालाई परमेश्वरको आफ्नै जीवनद्वारा मात्र हासिल गरिन सकिन्छ भनी महसुस गर्छन् । अझ झन् थोरैले ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमार्फत हामीलाई उपलब्ध तुल्याइएको परमेश्वरीय जीवनलाई जान्नु र अनुभव गर्नुको विषयलाई छोएका छन् । जीवनको ज्ञानमा विटनेस लीले पुनर्जन्मसित शुरू हुने र जीवनको भित्रिय चेतनालाई जान्नुसम्मै उन्नत हुने जीवनमा पुरयाउने पथलाई स्पष्ट पार्दछ । जीवनको ज्ञानले ख्रीष्टको असली अनुभवको निम्ति जग र उनको सहयात्री पुस्तक जीवनको अनुभवको लागि उपयोगी परिचय प्रदान गर्दछ ।”
जीवनको अनुभव के हो ?
जीवनको पहिलो अनुभव—पुनर्जन्म
पुनर्जन्ममार्फत पाइने कुरा
आत्माको चेतना र आत्मालाई जान्नु
आत्मा र प्राणबीचको भिन्नता
तीन जीवनहरू र चार नियमहरू
जीवनको बढाइ के हो ?
ज्योति र जीवन
ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग तीन महिमामय मण्डली